Myanmar’s Great Contribution in Finding Missing MH370 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » Myanmar’s Great Contribution in Finding Missing MH370
Myanmar’s Great Contribution in Finding Missing MH370
Posted by ေက်ာ္ဘသစ္ on Mar 13, 2014 in Myanmar Gazette, News | 11 comments
The completely bold predictive statements were made by Myanmar’s two awesome astrologers regarding the missing Malaysian Air-liner, MH 370, which vanished mysteriously last Friday.
San Zarni Bo, the most famous astrologer of Myanmar, confirmed that the plane has been no doubt kidnapped by the terrorists, and that the passengers aboard are still alive, according to the zodiac signs he sees.
On the other hand, U Zayyar, another brilliant prophet, invalidated SZNB’s theory of terrorist attack, though he, too, believes people’s lives are still safe. He re-formulated that the plane has been swallowed down byablack hole, again according to astrological equations he knows.
SZNB isakind of Mr. Knows of everybody’s fate, who writes books of prophecy each year and sells them to the people residing in the country, while the latter still hunting for fame, and not yet as rich as the guy above because his books do not sell well on the market.
Today, U.S, China, Vietnam etc. keep searching for the missing Boeing 777, and nobody knows if they giveafuck about Myanmar’s astrologer’s shits.
What is sure is; they would find it fucking funny if they hear that damned signs of zodiac can help predict the fate ofaplane, and thatablack hole,aspace ofadead star, exists in the sky over 30000 ft above the ground.
For the people of Myanmar, however, the moves of two astrologers should be appreciated somehow, for they make their best proactive effort on behalf of the government which, being in charge of ASEAN this year, can give no response to this issue of plane missing.
Myanmar, by its people refereed to as Golden Land, isarich country in terms of crazy ministers, mad religious leaders, dickhead astrologers, and above all,abald hypocrite President.
Report by ကျော်ဘသစ် from YGN
(မန်းဂေဇက်မှာ ဝင်ပြီး အလုပ်လျှောက်မလို့ သတင်းရေး လေ့ကျင့်နေတာပါ..။ လိုအပ်တာရှိရင် ပြင်ပေးကြဘာ…)။
တစ်စွန်းတစ်စ ကြားမိတာတော့ ရေတပ်ကပါ ကူရှာပေးနေတယ် ဆိုလားလို့
ပထမစာမျက်နှာမှာ မပေါ်. . . .
အခုမှ သဂျား commentတွေ ့လို့ဝင်ကြည့်မိတယ်။
အူးလေး အိုက်သတင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် အင်တာဗျူးပီးရေးတာလား…..
ဒါမှမဟုတ် သတင်းအရေးကျင့်ရုံသက်သက် ဖန်တီးထားတာလား…
Just for fun ဆိုရင်…ဟား..ဟား..ဟား (အကျယ်ရီး၃ခါ) ရီသွားပါတယ်
သတင်းရေးတာ အရမ်း တော်တယ်လို့ပြောပါရဇီ
မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း ဆိုရင် ကြာသပတေးနံ၊ လေယာဉ်ပျံသန်းတဲ့အချိန်ကလည်း နက္ခတ်အရ ပျက်ကိန်းကြုံရမယ့်အချိန်။ ဆိုလိုတာက ရာသီဥတု ဆိုးဆိုးရွားရွား တွေ့ရင်တွေ့၊ မတွေ့ရင် ဘေးဒုက္ခတွေ့ရမယ့် ကိန်းက လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းမရှိဘူး။ အခုအချိန်မှာ လေယာ်ဉ် ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ဆိုတာကို ပြောရရင် လေယာဉ်က အကြမ်းဘက်သမားတွေ ဖမ်းသွားတာ။ အားလုံး မသေသေးဘူး။ အသက်ရှင်နေသေးတယ်” ဟု နာမည်ကြီး ဗေဒင်ပညာရှင် စံ(ဇာဏီဘို)က ဟောသည်။
“ဒီဟောကိန်းက ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နက္ခတ်နဲ့ ဂြိုလ်တွေအနေအထားအရ အသက်ရှင်နေသေးတယ် ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဘက်သမားတွေက ဖမ်းဆီးထားတယ် ဆိုတာ မှားတယ်။ တွင်းနက်ကြီးထဲ ရောက်သွားတာ။ သေချာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နက္ခတ်ကြည့်တဲ့အခါ Black Hole ကြီး အကြီးကြီး ပေါ်နေတယ်။ ဒီလေယာဉ်က တွင်းနက်ထဲရောက်သွားတာ။ ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာလည်း အံ့ဩစရာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆန်းကြယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ သိပ္ပံပညာ မလိုက်နိုင်အောင် ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလေယာဉ် ဘာဖြစ်သွားသလဲ ပြောရရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ တွင်းနက်ထဲ ရောက်နေတာ။ တွင်းနက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ပြောရရင်တော့ မသိနိုင်သေးဘူး။ ဂြိုလ်တွေ လှုပ်ရှားတာကို နောက်ထပ် ၁ ရက်လောက် စောင့်ကြည့်ပြီးမှ တိတိကျကျ ပြောနိုင်မယ်။ တွင်းနက်ဆိုတာကို တချို့က အချိန်ယန္တရား ဆိုပြီး ပြောကြတာလည်း ရှိတယ်” ဟု နက္ခတ္တပညာရှင် ဦးဇေယျာကိုက ဟောသည်။
သိပ္ပံပညာလည်း.. နက္ခတ်ဆြာနဲ့တွေ့မှ.. အကျင့်ခံရတော့တယ်..။
ပြောင်ပြီး ရေးထားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေကို အခြေခံပြီး ရေးတာပါ။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရ အထက်က ဗေဒင်ဆရာကတွေ လေယာဉ်ပျံနဲ့ ပတ်သက်တာမျိုး မဟောခဲ့ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောတဲ့အကြောင်း ထပ်ဖတ်ရပါတယ်။
(မြန်မာပြည် မီဒိယာလောကမှာ သတင်းတစ်ခု မှန်မမှန် ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လို့ မရ၊ နောက်တစ်နေ့မှာ တောင်းပန်းလွှာတို့၊ အမှားပြင်ဆင်ချက်တို့ ပါလာလား မပါလာလား ကြည့်ပြီးတော့မှ ခပ်ဆဆ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့သတင်းကိုလည်း မြန်မာရီပေါ့တင်းစတိုင်လို့ မှတ်ကြပါကုန်….။ )
ခွိ ခွိ .. ကောင်းတယ် .. ဘယ်သူက သူတို့ ကို သောက်မြင်ကပ်ပြီးလက်ဆော့ပြီးရေးလိုက်လဲ မသိဘူး ။ အခုတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက် သူတို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်နေရတယ် ။
Myanmar, by its people refereed to as Golden Land, isarich country in terms of crazy ministers, mad religious leaders, dickhead astrologers, and above all,abald hypocrite President. သိပ်ကြိုက်တဲ့ စာပိုဒ်ပါ ဗရားဗိုးးးးး
there is no evidence of any wrongdoing on the part of the two pilots, though Malaysian police have said they are looking at their psychological background, their family life and connections.
The Times said radar signals appear to show the airplane climbing to 45,000 feet and makingasharp turn to the west. That altitude is above the approved limit foraBoeing 777-200.
လာမယ့်လာတော့.. မြန်မာပြည်ဖက်ကြီး… ။ မြန်မာပြည်မှာရေဒါစနစ်မရှိတော့.. ရန်ကုန်အပေါ်ကဖြတ်ပျံသွားတောင်.. သိလိုက်မှာမဟုတ်…။
မြန်မာပြည် မှာ ပြန်ရှာတွေ့ပါဆို ဆုတောင်းတဲ့ သူက ဆုတောင်း ။
အဲ့ဒါမှန်ခဲ့ရင်တော့တပ် ကတော့ -င်ကြိမ်းနေတော့မှာ .. လေယာဉ်ပျံ ဖြတ်ပျံသွားတာ တောင် မသိဘူးလားဆိုပြီး ..
စကား အတင်းစပ် .. အဲ့ဒီ့ ရှာဖွေ စားရိတ်တွေအကုန်လုံးဘယ်သူက ပေးရတာလဲ ..
မလေးရှားက ပေးတာ ဆိုရင်တော့ ရှာပေးရတဲ့ မြန်မာရေတပ်လည်း ဖရီး လေ့ကျင့်ခန်းရတာပေါ့ ..
ဟိုဆြာ တစ်ယောက်ကတော့ ၁ရ ရက်နေ့ အတွင်း ကုန်းတွင်းပိုင်းပေါ်မှာပြန်တွေ့မယ်ဆို ဟောထားလေရဲ့ ..